केरुङमा चीनकाे नाकाबन्दी ! - Nagarik Medi
केरुङमा चीनकाे नाकाबन्दी !
२०७७ श्रावण १८, आईतबार मा प्रकाशित १ साल अघि
काठमाडौं- २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको झल्को यतिबेला चिनियाँ नाकामा देखिएको छ । विगतमा चीनको केरुङ नाकामा नेपालतर्फ आउन लागेका कन्टेनरहरुको लस्कर हुन्थ्यो । तर यतिबेला नाकाबाट दैनिक ४ वटा कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रिने गरेका छन् । त्यसमाथि पनि अधिकांश ट्रकहरु स्याउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्रै छन् ।
‘हामीले ३० जनालाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिन भन्यौं, अझै संख्या घटाउन लेवरको समेत काम गर्नसक्ने ड्राइभरलाई पठाएर १५ जनाले व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी गर्यौं । तर उहाँहरुले हाम्रो कुनै कुरा सुन्न चाहनुभएन ।
अहिले त छिमेकीदेखि थाकेको अवस्था छु,’ रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले भने । खड्काले ४ वटा ट्रकमात्रै छाड्नुको कुन‌ै अर्थ नभएको भन्दै यसो गर्नुभन्दा वरु नाका नै ठप्प गरिदिए राम्रो हुने समेत बताए ।
साभार: राताे पाटी